Rhashiya - ALinks
Zinjani izibhedlele eRussia, isikhokelo esikhawulezayo kwizibhedlele zaseRussia
January 8, 2022 UAntika Kumari impilo, Rhashiya
Okokuqala, eRashiya, ungacofa i-103 ngekhonkco ngqo kwi-ambulensi yonyango engxamisekileyo. Bonke abaqhubi bathetha isiRashiya kwaye kufuneka bakwazi ukuthetha isiNgesi, bamba isithethi saseRussia xa sikufutshane
Ungawufumana njani umsebenzi eRashiya?
January 4, 2022 UAntika Kumari imisebenzi, Rhashiya
I-Russia inamathuba ohlukeneyo emisebenzi, kwaye uninzi lweengcali ezihlawulwa kakhulu ngabaphambukeli. Abathengisi abaqeshwe eRashiya bakwindawo ye-13 kuluhlu lwabona bantu bafumana umvuzo ophezulu ngo-2014. Bonke abantu bamanye amazwe abafuna ukusebenza eRashiya kufuneka
Disemba 16, 2021 IShubham Sharma iibhanki, imali, Rhashiya
Ibhanki ephakathi kunye neebhanki zorhwebo zibumba inkqubo yebhanki yaseRashiya. Iibhanki zaseRashiya kunye namaziko abolekisa ngemali aphantsi kolawulo lweBhanki yaseRashiya, enika neemvume zebhanki kwiibhanki zelizwe. Iibhanki ze-239 zinelayisensi yehlabathi jikelele, leyo
Uyivula njani iakhawunti yebhanki eRashiya
Agasti 21, 2021 IShubham Sharma iibhanki, Rhashiya
Kule minyaka idlulileyo, inani elikhulu labaphambukeli ligqibe kwelokwenza iRussia ibe likhaya labo bekhangela ubomi base-Yuropu kunye neenkcubeko zayo eziqaqambileyo zenkcubeko kunye nembali, ngakumbi kwiindawo ezinje ngeMoscow neSt. IRashiya ilungile
Disemba 29, 2020 UAntika Kumari izindlu, Rhashiya
AmaNdiya ayifumana njani iVisa yaseRussia?
Oktobha 30, 2020 IShubham Sharma Indiya , Rhashiya, hamba, ivisa
Ukufaka isicelo sephepha-mvume lokundwendwela iRussia ukusuka eIndiya ayisiyonto inzima njengoko kubonakala ngathi. Kule nqaku, uya kuyazi iseti epheleleyo yolwazi malunga neVisa yaseRussia yamaIndiya. Uya kufika apha: Ezahlukileyo
Eyona Ndlela isetyenziswayo yeZothutho eRussia
Ngamana 17, 2020 UAntika Kumari yibakhona, Rhashiya, hamba
I-Russia lilizwe elikhulu elinemigama emide, kodwa nokuba lutyelelo lwakho lokuqala eRashiya, ukuya kwindawo yakho ngokwakho akunzima. Into ephambili kukucwangcisa indlela yakho, ngokungathi uye nakweyiphi na indawo engaqhelekanga
Indlela yokufunda e-Russia: Isikhokelo samanyathelo
Aprili 28, 2020 UAntika Kumari Rhashiya, isifundo
Ukuba ufuna ukufunda eRussia, khetha indawo ofuna ukufunda kuyo. Kwakhona jonga ukuba ngaba ufuna ikhosi yokulungiselela isiRashiya sakho ngoba uninzi lwezi zifundo zilulwimi lwaseRussia. Nje ukuba uthathe isigqibo sokuba yeyiphi
Ungasifaka njani isicelo sokhuseleko eRashiya?
Aprili 24, 2020 IShubham Sharma ababaleki, Rhashiya
Masithi ufuna ukufaka isicelo sokukhuselwa eRussia, emva koko kuya kwi-FMS. Kwakhona, iFederal Migration Service (FMS) kuphela komzimba eRashiya ojongana nemicimbi yeembacu. Ukufumana iwonga lokubaleka okanye ukufumana indawo yokukhosela eRashiya.